Banyere Anyị - Alluter Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Alluter Technology (Shenzhen) Co., Ltd bụ otu n'ime ndị na-eduga sputtering lekwasịrị emepụta na China. Ọ e tọrọ ntọala na 2007 na ngwa ngwa mgbasa na-a ụlọ ọrụ nwere mîdaha 200 plus ọrụ eduga na site na ahụmahụ management otu.
E nwere ise mmepụta bases n'okpuru anyị kpam-akụ ụlọ ọrụ (Plasma spraying Factory, Labour-kpụ ọkụ n'ọnụ Machine Ịmịpụta Factory, Research and Development Centers, Large Non-ọkọlọtọ Ịmịpụta Factory, refractory Ihe Factory) .Giving play anyị ụlọ ọrụ niile na ọrụ nke dị iche iche ihe iji nweta ihe ndị kasị ọkachamara usoro njikọ yinye, ekpuchi akụkụ nile nke lekwasịrị mmepụta.
ALLUTER ike na-enye nke kacha mma mma obere metal na-abụghị ferrous metal zaa, dị iche iche nke alloy ihe zaa, seramiiki zaa, ntụ ntụ na granule zaa, isi na-agụnye ČR, edebata, sus, Si, Sn, C, ITO, NiCr, TiAl, SiAl , ČR + Cu bonded, e wezụga, na-enye lekwasịrị metallization na o sie ọrụ.
ALLUTER guzo n'azụ ha na ngwaahịa, ya na ngwaahịa na-ọma gbaara site SGS, MSDS, RoHS, iru maka USA Market, Aisa Market, na European Market.
The ihe mgbaru ọsọ nke ALLUTER ụlọ ọrụ bụ ịnapụta ndị mbụ na klas Sputtering iche ngwaahịa na afọ ojuju na-ejere ya kpọrọ ahịa, ka anyị ọkachamara na-ahịa ụkpụrụ.
Kwere ALLUTER sputtering lekwasịrị gị ga-abụ akpa oke nke sputtering lekwasịrị soplaya!
Alluter kọwakwuru ikike atụmatụ ke 2017-2018
Alluter ụlọ ọrụ nọ na-amụba rotary lekwasịrị mmepụta ike na China na Oct 2017. The mgbasa ga-amụba ikike site 80% na Guizhou factory. The ụba ike ga-eme ka Alluter na-akwado ngwa ngwa g ...